မကွာခငျ မှာ စာနယျဇငျး ရှငျးလငျးပှဲ လုပျသှားမယျ လို့ ကိုယျတိုငျပွော လာတဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံ – Askstyle
မကွာခငျ မှာ စာနယျဇငျး ရှငျးလငျးပှဲ လုပျသှားမယျ လို့ ကိုယျတိုငျပွော လာတဲ့ ဖွိုးပွညျ့စုံ
Melody World သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ မှတဈဆငျ့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေး ခဈြခငျမှုကို အပွညျ့အဝ ရရှိထားတဲ့ အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံကတော့ အရညျအခငျြးပွညျ့ဝသူ တဈဉီးပါ။၇.၁၀. ၂၀၁၉ ရကျနမှေ့ာ ဖွိုးပွညျ့စုံနဲ့ အပေါငျးအပါ နှဈဦးကို မူးယဈဆေးဝါးမှု့နဲ့ ဗဟနျးမွိုနယျ ဆရာစံရပျကှကျ Myanmar Plaza ရှိ Glonja Jans Coffee ဆိုငျ ရှမှေ့ာ ဖမျးဆီ ခံခဲ့ရတာကွောငျ့ အနုပညာလောကမှာ အရမျးကို စိတျမကောငျးဖွဈနကွေတာပါ။ဒီနမှေ့ာတော့ လှတျမွောကျလာပွီဖွဈတဲ့ အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံ က စာနယျဇငျးရှငျးလငျးပှဲ လုပျမယျဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ဖျောပွပေး လိုကျပါတယျနျော။
၇.၁၀. ၂၀၁၉ ရကျနမှေ့ာ အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံ အပါအဝငျ အမြိုးသား သုံးဦးကို မူးယဈတပျဖှဲ့က တရားလိုပွု တိုငျတနျးမှုကွောငျ့ ဗဟနျးရဲစခနျးမှာ ဖမျးဆီးထိနျးသိမျးထားခွငျးခံထားရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုတျော ဖွိုးပွညျ့စုံကို ဆေးပွားမြားဖွငျ့တှရှေိ့တယျ ဆိုတဲ့သတငျအပျေါ ဖွိုးပွညျ့စုံက သူ့လကျထဲ မှာ ရှိတဲ့ ဆေးပွားတှကေ မူးယဈဆေးဝါးမြား မဟုတျကွောငျးငွငျးဆိုခဲ့ပွီး ဒီနမှေ့တော့ မှားယှငျးဖမျးဆီးမှုမှ လှတျမွောကျလာပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။
အဆိုတျောဖွိုးပွညျ့စုံ က သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျပျေါက ” ကနြျော ၊ ရျောနီ နဲ့ ငွိမျးခမျြးကို တို့ရဲ့ မှနျကနျမှုကို ယုံကွညျပေးတဲ့ အယောကျခငျြးစီ ကို ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ မကွာခငျ မှာ media conference လေးတခု လုပျနိုငျဖို့ ကနြျော စီစဉျပါ့မယျ..” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။
အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြား ကလညျး သူတို့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျပျေါမှာ အရမျးပြျောရှငျရကွောငျး တငျထားကွတာပါ။ပရိသတျကွီးကလညျး အဆိုတျောဖွိုးပွညျ့စုံ လှတျမွောကျပွီ ဖွဈတဲ့ အတှကျ ပြျောရှငျကွ လိမျ့မယျလို့ ထငျပါတယျ။
Source;Phyo pyae sone,CRD-MOMOLAY
Zawgyi Version ဖြင့် ဖတ်ပါ
Melody World သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ မှတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေး ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ အရည်အချင်းပြည့်ဝသူ တစ်ဉီးပါ။၇.၁၀. ၂၀၁၉ ရက်နေ့မှာ ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ အပေါင်းအပါ နှစ်ဦးကို မူးယစ်ဆေးဝါးမှု့နဲ့ ဗဟန်းမြိုနယ် ဆရာစံရပ်ကွက် Myanmar Plaza ရှိ Glonja Jans Coffee ဆိုင် ရှေ့မှာ ဖမ်းဆီ ခံခဲ့ရတာကြောင့် အနုပညာလောကမှာ အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပါ။ဒီနေ့မှာတော့ လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ က စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်နော်။
၇.၁၀. ၂၀၁၉ ရက်နေ့မှာ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ အပါအဝင် အမျိုးသား သုံးဦးကို မူးယစ်တပ်ဖွဲ့က တရားလိုပြု တိုင်တန်းမှုကြောင့် ဗဟန်းရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံကို ဆေးပြားများဖြင့်တွေ့ရှိတယ် ဆိုတဲ့သတင်အပေါ် ဖြိုးပြည့်စုံက သူ့လက်ထဲ မှာ ရှိတဲ့ ဆေးပြားတွေက မူးယစ်ဆေးဝါးများ မဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ဒီနေ့မှတော့ မှားယွင်းဖမ်းဆီးမှုမှ လွတ်မြောက်လာပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်က ” ကျနော် ၊ ရော်နီ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းကို တို့ရဲ့ မှန်ကန်မှုကို ယုံကြည်ပေးတဲ့ အယောက်ချင်းစီ ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် မကြာခင် မှာ media conference လေးတခု လုပ်နိုင်ဖို့ ကျနော် စီစဉ်ပါ့မယ်..” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
အနုပညာရှင်တော်တော်များများ ကလည်း သူတို့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ အရမ်းပျော်ရွှင်ရကြောင်း တင်ထားကြတာပါ။ပရိသတ်ကြီးကလည်း အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ လွတ်မြောက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပျော်ရွှင်ကြ လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။